३ विद्यार्थी १ महिनादेखि बेपत्ता; प्रशासनले चासो नदिएको गुनासो « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
३ विद्यार्थी १ महिनादेखि बेपत्ता; प्रशासनले चासो नदिएको गुनासो
शिशिर सिंखडा, चितवन । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिका – ७ खोलेसिमल बजारस्थित सिद्धि विनायक आ.मा.वि. मा अध्ययनरत ३ जना विद्यार्थी एक महिनादेखि बेखबर छन् ।
गत बैसाख १७ गते शुक्रबार आ–आफ्नो घरबाट स्कुल हिडेका उनीहरुको एक महिना बितिसक्दा समेत कुनै अत्तोपत्तो छैन । विद्यालय जान भनी हिडे पनि उक्त दिन उनीहरु विद्यालय गएका थिएनन् । कालिका नगरपालिका – ६, खोलेसिमलका १३ वर्षीय अश्विन धमला, सोही वडा नयाँ टोलका १२ वर्षीय थोमस लामिछाने र वडा नं. ८ लंकालाईनका १४ वर्षीय राज गुरुङ्ग एकै कक्षाका दौतरी हुन् । उनीहरु सोही विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत थिए ।
बिहान खाना खाई साईकल लिएर विद्यालय हिडेका राज गुरुङ्गको साईकल विद्यालयको गेट बाहिर छाडेको अवस्थामा पाइएको राजका बुबा लेख बहादुर गुरुङ्गले बताए । दुई छोरा मध्येका जेठा छोरा राज बेपत्ता भएपछि सोही कक्षामा पढ्ने भाइ रजत पनि मानसिक पिरलोमा परेका छन् । अहिले उनको परिवारमा रुवाबासी छ । आमा अनिता बैदेशिक रोजगारको क्रममा दुबई गएको १५ महिना भयो । उता आमा पनि रुदारुदा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् लेख बहादुरले भने ।
गुरुङ्ग र लामिछानेको भन्दा कम पीडा धमला परिवारमा पनि छैन । डिलमाया धमला र बुद्धि प्रसादको कान्छा छोरा अश्विन बेपत्ता भएदेखि जेठो छोरो आयुषको पढाई धेरै बिग्रीसकेको छ । छोराको पीरले चिन्तित आयुषको आमा डिलमायाको आँखा कहिल्यै ओभानो देखिदैन । बुबा रोजगारीको सिलसिलामा भारतको कोलकत्तामा मजदुरी गर्दछन् । छोरा बेपत्ता भएदेखि यो परिवारको पीडा पनि दर्दनाक छ । मध्यम परिवारका यी विद्यार्थी बेपत्ता भएको एक महिना बित्दा समेत प्रहरी प्रशासनले चासो दिएर खोजतलास नगरेकोमा आफन्तजनको गुनासो छ ।
हाम्रो सुनिदिने, बोलिदिने कोही छैन, खोजतलासको लागि प्रशासनले सहयोग गर्न समेत परिवारजनले आग्रह गरेका छन् । एक महिनादेखि धमला, गुरुङ्ग र लामिछानेका परिवार, इष्टमित्र, छरछिमेक र विद्यालयका शिक्षकले समेत पूर्व मेची देखि महाकालीसम्मका बीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज लगायतका नाकाहरु पोखरा, काठमाडौं तथा विभिन्न शहरहरुमा खोजतलास गर्न पुगेपनि बेपत्ता छोराहरुको बारेमा केहीपनि पत्तो पाउन नसकेको परिवारजनले बताएका छन् ।